I-Sweatshirts → Iimpahla ezisebenzayo • I-P & M yobuchwephesha yobuchwephesha
Iingubokanye ecaleni kwayo ibhulukhwe i Iikipa, Iseti esisiseko yempahla yabasebenzi kumashishini amaninzi. Uluhlu olubanzi lweemodeli ezikhoyo ezivela kuthi shop yenza ukuba kukhethwe imveliso kuxhomekeke kwinjongo yayo okanye ukhetho lomsebenzisi.
I-Sweatshirts zomsebenzi kwaye yonke imihla ineempawu zakho
Iimodeli ezinikezelweyo zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, umsebenzi wazo lolona xinzelelo oluphezulu ekusebenzeni nasekuzikhuseleni kwiimeko zemozulu ezinzima.
I sweatshirt zizixhobo ezisisiseko zabameli bamashishini amaninzi, kubandakanya. ulwakhiwo, imveliso okanye ulungiselelo. Banetyala lokusebenzisa izinto zabo ngezinto ezahlukeneyo-ngaphandle kokubonelela ngemfudumalo nomoya okanye ukubanda, bavumela inkululeko engakumbi yokuhamba kuneebhatyi, ngelixa befumana iimpahla zabucala.
Sinikezela ngeemodeli zawo onke amaxesha onyaka ahlengahlengiswe kwiimeko ezahlukeneyo zemozulu okanye amajuba otshintsho entwasahlobo okanye ekwindla.
Siyakunika iibhatyi zomsebenzi ngamaxabiso ahlukeneyo ngokuxhomekeke kwimodeli- ukusuka kwezona zisisiseko ukuya kutyebiswa ngenjongo ekhethekileyo.
Zininzi zenziwe nge-polyester, ebonelela ngokugquma okukhulu kwe-thermal, kwaye ke inkululeko enkulu yokuhamba ihamba iklasikhi iibhatyi zomsebenzi.
Ukongeza, uninzi lweemodeli zineekhola zokuma zokufudumeza ubushushu kunye neepokotho ezenziwayo ezineziphu. Sinikezela ngee sweatshi ezinemibala eyahlukeneyo, enemikhono emide nemifutshane, kunye nomlinganiswa isilumkiso ngezinto ezibonakalisayo.
Iimpahla ezibonakalisa iya kusebenza ngokufanelekileyo kubasebenzi bendlela, abakhi okanye abo basebenza emva kobusuku.
Iihempe zomsebenzi iinkampani ezinje Reis okanye Stedman Zenziwe ngamalaphu amelana nokusetyenziswa kakhulu.
Ukukhusela izinto ezivezwe kukukrala, izinto ezizodwa zokukhusela zathungwa kwiimodeli ezikhethiweyo. Kwakhona, ezinye izitayile ziye zacetyiswa ngemingxunya yokunciphisa ukubila ngexesha lokuzilolonga kakhulu.
Uninzi lweemodeli zineewel ekhululekile esinqeni nasezihlahleni ukukhusela ngokuchasene nomonakalo kwimpahla yabucala okanye kumdaka.
Kuthengiswa zezi: iibhatyi zoboya, iibhatyi zomsebenzi, iibhatyi ezinepolypropylene, iibhatyi ezilumkisayo, iijezi.
Iihempe zomsebenzi ngokuprinta kuxhaphake ngakumbi kuba kuyalingana nefom yexabiso eliphantsi lentengiso. Ngale nto engqondweni, qwalasela indlela yokumakisha esemgangathweni enganyangekiyo kumonakalo, ukulahleka kombala kunye nokuhlamba okuphezulu kobushushu. Kungenxa yoko le nto sikhuthaza ukuba kwenziwe ubuqu obuqinileyo isambatho sekhompyuter.
Ijezi zomsebenzi wamadodaAmadoda asebenza ngoboya begushaiibhatyi zoboyaiibhatyi zomsebenziUmsebenzi weAllegro sweatshiiibhatyi ezimhlophe zomsebenziIjezi zomsebenzi zabasetyhiniIidyasi zomsebenzi wedenimengelbert strauss iibhatyi zomsebenziiihempe zomsebenzi julaIidyasi zomsebenzi zamadodaiibhatyi zomsebenzi ezifakwe igqunyiweIibhatyi zomsebenzi ezibonakalisaiihempe zomsebenziIhempe zoboyaIAllegro ibhatyi yomsebenziIndawo yokusebenza kweehempe: allegro.plisofttshell iibhatyi zomsebenziiibhatyi zomsebenzi ongwevuIibhatyi zomsebenzi ezine-hoodI-sweatshirts zomsebenzi kunye nokuprintaI-sweatshirts zomsebenzi kunye ne-Allegro printIibhatyi zomsebenzi wasebusikaiibhatyi ezishushu zomsebenziiihempe zomsebenzi julaiihempe ezivulekileyoIjezi zomsebenziiibhatyi zoboyaI sweatshi zomsebenzi ezingabiziiimpahla zokunxiba
4.9 / 5 ( 16 iivoti )